‘ईसाइलाई दसैं मान्न लगाउने, हिन्दूले क्रिसमस मान्दा के भयो र ? « NBC KHABAR
‘ईसाइलाई दसैं मान्न लगाउने, हिन्दूले क्रिसमस मान्दा के भयो र ?
क्रिश्चियन धर्मवालम्बीले धुमधामका साथ क्रिसमस डे मनाएका छन् । क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सवको अवसरमा मंगलबार विश्वभर क्रिसमस डे मनाइएको हो । हरेक वर्ष डिसेम्बर २५ तारिखका दिन क्रिसमस डे मनाउने गरिन्छ ।
विश्वभरझैं नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी क्रिसमस डे मनाइएको छ । विशेष गरी काठमाडौंको ठमेल र बौद्धमा विशेष कार्यक्रम भएको छ । उपत्यकासँगै देशभर विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम गरी क्रिसमस डे मनाइएको हो । क्रिसमस डेको अवसरका राजधानीका विभिन्न सार्वजनिक स्थल, व्यपारिक भवन तथा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले आफ्नो घर विशेष रुपमा सजाएका छन् । यसदिन क्रिसमस ट्री बनाएर बजार एवम् व्यापारिक स्थल सजाउने चलन छ ।
क्रिसमसलाई हिउँ र चिसो सिरेटोबिचको पर्वका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले यसमा प्रयोग हुने बिम्ब त्यस्तै छ । क्रिसमसमा रुख, हिउँ, न्यानो कपडा लगाएको प्रतिबिम्ब बढी प्रयोग हुन्छ ।
क्रिसमस डेका अवसरमा विश्वभर झैं नेपालका रहेका चर्चहरुमा विशेष कार्यक्रम भएको छ । जहाँ क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्मका संस्थापकको जन्मोसव खुसीका साथ मनाएका छन् । जन्मोत्सवका अवसरमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्मका संस्थापकलाई सम्झँदै बाइबल बाचन गरेका छन् ।
क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको प्रमुख पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरेका छन् ।
यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको सिन्धु इसाई केन्द्रले क्रिसमस डेको अवसरमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । खडिचौरमा आयोजित आर्यक्रममा तीन नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिधिसँगै हज्जारौंको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीले क्रिसमस डेको अवसरमा आपसी सद्भाव र सहिष्णुताका लागि शुभकामना दिए ।
२०६४ साल अघिसम्म नेपालमा क्रिसमस डे चर्चमा मात्र सीमित हुन्थ्यो । अहिले खुलखुला सबैतिर सांगीतिक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउन थालिएको छ । सरकारले २०६४ देखि नै क्रिसमस डेका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । तर, गतवर्षदेखि यसदिन क्रिश्चियन धर्मवालम्बीलाई मात्रै सार्वजनिक विदा दिन थालिएको छ । नेपालमा हजारौं चर्च छन् । त्यस्तै, २०६८ सालको जनगणना अनुसार करिब चार लाख क्रिश्चियन धर्मावलम्बी छन् । क्रिश्चियन महासंघले भने नेपालमा ३० लाख हाराहारीमा क्रिश्चियन भएको दाबी गर्छ ।
को हुन् येशु ख्रिष्ट ?
दुई हजार १७ वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कुमारी मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको बताइन्छ । मारियमको विवाह युसुफसँग गर्न लाग्दा स्वर्गदूतले भविष्यवाणी गरी येशुले जन्म लिन लागेको जानकारी गराएका थिए भनेर विश्वास गरिन्छ । । उनको जन्म मानवको संसर्गबाट नभई ईश्वरीय शक्तिबाट भएको इसाई अनुयायीको विश्वास छ ।
सर्वसाधारण मानिसलाई अन्याय, अत्याचार र विभेदबाट मुक्ति दिलाउन येशु आफैं क्रसमा चढेको उनका अनुयायीको भनाइ छ । येशुलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ । उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा इस्वी संवत् चलाइएको विश्वास गरिन्छ ।
विश्वभर झैं नेपालमा पनि धुमधामका साथ क्रिसमस डे मनाइरहँदा धार्मिक सहिष्णुतासँगै आपसी सद्भावको बहस भएको छ । २०६४ सालअघि नेपाल हिन्दू राज्य भएको स्थितिमा क्रिश्चियन धर्मको प्रभावलाई अस्वभाविक मानिन्थ्यो । अहिले संविधानमा नै मुलुक धर्म निरपेक्षा उल्लेख भएपछि कुनै पनि धर्म विशेष पर्व मान्नु स्वभाविक भएको छ । र, यस्ता पर्वहरुलाई धार्मिक हिसाबमा भन्दा पनि सँस्कार र आपससी सद्भाव विकासको अवसरका रुपमा लिनुपर्ने तर्क धेरैको छ ।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । तर, हामीमा एक धर्म मान्ने वा फरक जातको पर्वलाई सामुहिक रुपमा मान्ने प्रचलन छ । जुन हाम्रो धार्मिक, जातीय एवम् साँस्कृतिक सौहार्दता र सहिष्णुताको नमूना हो । नेपाल धर्म, संस्कृति र परम्परामा विश्वमै समृद्ध मुलुक हो । र, इतिहासदेखि नै हामीमा एकले अर्काको अस्तीत्व स्वीकार्ने सँस्कार छ । त्यसैले त क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको पर्व क्रिसमस डेमा फरक धर्म मान्ने पनि रमाएका छन् ।
विभिन्न जातजातिको सुन्दर फूलबारीको रूपमा परिचित नेपाल धर्म र संस्कृतिमा विश्वकै उदाहरणीय देशमा पर्नुको मूल कारण हाम्र्रो आपसी सहिष्णुता नै हो । हाम्रो राष्ट्रिय गानमा समेटिएको ‘सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भन्ने पंक्तिले पनि हाम्रो धार्मिक सहिष्णुतालाई देखाउँछ ।
तराईमा मनाइने छठ पर्वलाई तराईवासीले मात्र मनाएर एक भेग र एक जाति विशेषमा मात्र सीमित नराखी पहाड र उपत्यकामा पनि धुमधामकासाथ मनाइन्छ । पहाडमा मनाइने उधौँली उभौँलीलाई पनि देशभर छरिएर रहेका सबै सम्प्रदायले खुसी साटासाट गरेर मनाउने हाम्रो परम्परा छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीको दसैं÷तिहार पनि अरु धर्म मान्नेले मनाउनु र क्रिश्चियनको क्रिमससमा सबै धर्म मान्नेले खुसीसँगै शुभकामना साट्नु हाम्रो साँस्कृतिक सौन्दर्य हो । तर, कतैबाट धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने प्रयास भइरहेको त छैन ? भन्नेबारे हामी सचेत हुनै पर्छ ।
धार्मिक सहिष्णुताकै कारण अहिलेसम्म नेपालमा जात, सम्प्रदाय र धर्मका नाममा झगडा वा हिंसा भएको छैन । र, अब पनि धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्दै आपसमा खुसीका साथ चाडपर्व मनाउन सक्नु पर्छ । अझ धार्मिक सहिष्णुतालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।